user name and password ကို mysql မှာဘယ်လိုဆောက်ရလဲ - MYSTERY ZILLION
user name and password ကို mysql မှာဘယ်လိုဆောက်ရလဲ
December 2008 edited December 2008 in PHP
ကျနော်က inserting data into mysql ဆိုတာကို
၁။ test_mysql ကို phpadmin မှာ table ဒီလိုဆောက်လိုက်ပါတယ်
CREATE TABLE `test_mysql` (
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 ;
<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1">
<td><form name="form1" method="post" action="insert_ac.php">
<td colspan="3"><strong>Insert Data Into mySQL Database </strong></td>
<td width="301"><input name="name" type="text" id="name"></td>
<td><input name="lastname" type="text" id="lastname"></td>
<td><input name="email" type="text" id="email"></td>
<td colspan="3" align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Submit"></td>
$tbl_name="test_mysql"; // Table name // Connect to server and select database.
$sql="INSERT INTO $tbl_name(name, lastname, email)VALUES('$name', '$lastname', '$email')";
// if successfully insert data into database, displays message "Successful".
အဲဒီလိုရေးပီး insert.php ကို run ကြည့်တာ error ကတော့မတက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျနော် နားမလည်တာက user name and password ကို mysql မှာ ဘယ်လိုဆောက်လဲ...phpmyadmin မှာပဲဆောက်တာလား...
ကျနော်က php and sql database examples တွေကိုခုမှစရောက်တာဆိုတော့
ကျနော်သုံးတာက wampserver2.0 ပါ။
Database username နဲ့ password ကိုပြောတာ ထင်ပါတယ်။
phpmyadmin မှာလည်း ဆောက်လို့ရပါတယ်။
mysql မှာလည်း သွားဆောက်လို့ရပါတယ်။
phpmyadmin မှာဆောက်ပုံက ->
Phpmyadmin ကို ဖွင့်လို်က်ပါ -> Mysql (17) -> Privileges ထဲက Addanew user ကို ကလစ်ပါ။
Username : မှာပေးမဲ့ database user name ကိုပေးပါ။
Host : localhost လို့ပေးပါ။
Password : ပေးမဲ့ password
Global privileges အောက်ဟာတွေကို အမှန်ခြစ်အားလုံးပေးပါ။ ဒါမှ သုံးလို့ရမှာပါ။
ဒါပါပဲ MySQL ကနေ create လုပ်တာ သိချင်ရင်လဲ ထပ်မေးပါ။ ထပ်ပြောတာပေါ့
နောက်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း နားမလည်တာရှိရင် မေးအုံးမယ်နော်....